Miyuu Sergio Aguero seegi doonaa kulanka kooxdiisa Man City ay la leedahay Brighton? – Tababare Pep ayaa ka jawaabaya – Gool FM
(Manchester) 12 Jan 2021. Sergio Aguero ayaa seegi doona kulanka horyaalka Premier League ee kooxdiisa Manchester City ay la ciyaari doonto Brighton habeen dambe, sida uu xaqiijiyey tababarihiisa Pep Guardiola.
Weeraryahanka reer Argentina ayaa seegay kulankii Axaddii wareegga saddexaad ee FA Cup-ka oo ay guusha ka gaareen Birmingham, maadaama uu ku jiro xaalad karaantiil ah markii xiriir la sameeyey qof qaba caabuqa Korona Fayras.
Markii la weydiiyey xaaladda Aguero, macallin Guardiola ayaa isagoo ku guda jira shirkiisa jaraa’id waxa uu yiri: “Wuxuu marayaa xeerka karaantiilka, sagaal ama toban maalmood kaddib waa uu soo laaban doonaa.”
Guardiola waxa uu ka hadlay weeraryahankiisa kale ee Raheem Sterling, kaasoo sidoo kale seegay kulankii ay guusha 3-0 ah ka gaareen Birmingham, waxaana uu xusay in xiddiga reer England uu taam yahay.
Yeelkeede, Macallin Pep Guardiola waxa uu shaaca ka qaaday in labadiisa daafac ee Aymeric Laporte iyo Nathan Ake ay seegi doonaan kulankan oo ay maqan yihiin.
"Waxaan doonayaa inaan ka ciyaaro Mareykanka ka hor inta aanan ciyaaraha ka fariisan" - Mesut Ozil
Mourinho oo u jawaabay Ozil kaddib markii uu yiri: ‘waxaan door-bidi lahaa inaan fariisto halkii aan u ciyaari lahaa Spurs’